လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စွပ်စွဲ ပြစ်တင်မှုများသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ရင်ဆိုင်နေရသည့် အခက်အခဲများ၊ စိန်ခေါ်မှုများဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ပြောကြား | Eleven Media Group
လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စွပ်စွဲ ပြစ်တင်မှုများသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ရင်ဆိုင်နေရသည့် အခက်အခဲများ၊ စိန်ခေါ်မှုများဖြစ်ကြောင်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ပြောကြား
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကာတာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးအားနေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ - တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး)
မိမိနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် နိုင်ငံအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ စွပ်စွဲပြစ်တင်မှုများသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ရင်ဆိုင်နေရသည့် အခက်အခဲများ၊ စိန်ခေါ်မှုများဖြစ်ပြီး ယင်းတို့ကို အောင်မြင်စွာ ဖြေရှင်းကျော်လွှားနိုင်ရန် တပ်မတော်အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကာတာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr Hassan Bin Mohamed Rafei Al-Emadi အား ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ယင်းသို့တွေ့ဆုံရာတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် မိတ်ဆွေနိုင်ငံများဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ကာတာနိုင်ငံ၏ သံရုံးစတင်ဖွင့်လှစ်၍ သံအမတ်ကြီးတာဝန် ထမ်းဆောင်မှုအတွက် ၀မ်းမြောက်ကြိုဆိုကြောင်း နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြား၍ မိမိနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုကိစ္စရပ်များတွင် တပ်မတော်အနေဖြင့် ရိုးသားစွာ လိုလိုလားလား ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ တစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် အမှန်တကယ် ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူလိုစိတ်နှင့် ယုံကြည်မှုရှိရန် လိုအပ်သည့်အခြေအနေများ၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုရှိကြောင်း စွပ်စွဲမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားသည့် တိုက်ပွဲများကြောင့် ရိုးရိုးသားသား တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများအတွက် တပ်မတော်က အစွမ်းကုန်ကူညီပေးမှု၊ လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထားမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး တပ်မတော်၏ Code of Conduct တွင်လည်း ပြဋ္ဌာန်းထားပြီးဖြစ်၍ တိကျစွာ လိုက်နာဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ရှိပါက ဖြေရှင်းရန် အဆင်သင့် ရှိသည်ဟု ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အဓိကကျသည့် စာရင်းဇယားများ မှန်ကန်စွာ မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်မှု၊ စိစစ်မှတ်ပုံတင်ပြီးသူများကို ဥပဒေနှင့်အညီ ရသင့်သည့် အခွင့်အရေးများရရှိအောင် လုပ်ဆောင်ပေးရန် လိုအပ်မှု အခြေအနေများ၊ ယင်းဒေသတွင် တပ်မတော်အနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု မရှိကြောင်းနှင့် ချိုးဖောက်မှု တစ်စုံတစ်ရာ ရှိပါကလည်း တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း၏ မှားယွင်းမှုသာဖြစ်ပြီး ဥပဒေနှင့်အညီ အရေးယူမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုအတွက် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် တပ်မတော်အနေဖြင့် နိုင်ငံ မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေမည့် ကိစ္စရပ်များကို မလိုလားကြောင်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ကြောင်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ယင်းနောက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကာတာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr Hassan Bin Mohamed Rafei Al-Emadi က မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ကာလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အခက်အခဲရှိမှုများ၊ လူ့အခွင့်အရေးအကြောင်းပြ၍ အစိုးရအပေါ် ဖိအားပေးနေမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကြားသိရကြောင်း၊ မကြာသေးမီက မလေးရှား နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် OIC အစည်းအဝေးတွင်လည်း ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဖိအားပေးသည့်အပေါ် နည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြင့် ဖြေရှင်းရန် အချိန်ပေးဆောင်ရွက်သင့်သည်ဟု ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအရေး ကိစ္စများ တည်ငြိမ်အေးချမ်းစေရန် မျှော်လင့်ကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များတွင်လည်း လိုအပ်သည်များ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း) မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကာတာနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး နှင့်အတူ နိုင်ငံရေးအရာရှိ Mr.Nazar Fadol တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။